दक्षिण-पश्चिम चीनको यस्तो भीर जसले हरेक ३० वर्षमा ‘अण्डा’ पार्छ !
हरेक ३० वर्षमा अण्डाकार चट्टान पार्ने दक्षिण-पश्चिम चीनमा रहेको भीर । तस्बिर : AsiaWire/metro.co.uk
चीन। भूगर्भशास्त्रीहरुले एउटा अनौठो भीरमा हुने घटनाको समाधान निकालेको दाबी गरेका छन् ।
दक्षिण—पश्चिम चीनको ग्विझाउ प्रान्तमा रहेको क्विन्नाम बुयेई र मियाओ स्वशासित क्षेत्रको गुनु भन्ने गाउँमा रहेको एउटा भीरबाट हरेक ३० वर्षमा अण्डाकारका चिल्ला ढुंगाहरु निस्किने गरेको घटनाको समाधान निकालेको दाबी गरेका हुन् ।
उक्त क्षेत्रमा रहेको चन डान या नामको भीर १९ फिट अग्लो र ६५ फिट लामो रहेको छ । सोही भीरबाट हरेक तीन दशकमा अण्डाकार ढुंगाहरु निस्किने गरेका छन् । यसले त्यस क्षेत्रवरपर बस्दै आएका मानिसहरुलाई रनभुल्ल पार्ने गरेको छ । उनीहरुले वर्षौँदेखि भीरबाट अण्डाकार ढुंगाहरु निस्केर खस्ने गरेको अवलोकन गर्दै आएका छन् ।
यसलाई कुनै कुखुराले निश्चित समयसम्म ओथारो बसेर चल्ला कोरलेको घटनाजस्तै लिने गरिएको छ । किनभने उक्त समयावधिमा भीरमा निस्किएर अण्डाकार ढुंगाहरु भुइँमा खस्ने गरेका छन् । स्थानीयहरुले भने यसलाई आफ्नो भाग्यसँग जोडेर धार्मिक विश्वास गर्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म त्यस भीरबाट निस्किएकामध्ये ७० वटाजति ढुंगाहरु सुरक्षित राखिएका छन् भने कतिपय ढुंगाहरु बिक्री गरिएको र कतिपयको चोरी भएको बताइएको छ ।
यता भूगर्भविद्हरुले सोही क्षेत्रमा घटनाको कारण पहिल्याउन विभिन्न परीक्षणहरु गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार ती ढुंगाहरु क्याम्ब्रियन पेरियड (समयावधि)मा बनेका थिए । यो समय भनेको करिब करिब पाँच सय मिलियन वर्षपहिलेको हो ।
माउन्ट गांग्डेंगको भाग पर्ने उक्त भीर पूरै काल्कारिअस चट्टानले बनेको पत्ता लागेको छ । त्यसो त यो चट्टान पृथ्वीका धेरै ठाउँमा पनि रहेको विश्वास गरिएको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार समयक्रममा उक्त चट्टान विभिन्न भागमा खिइएर उक्त आकारमा परिणत हुने गर्दछ । तर जे भए पनि किन अण्डाकारमै र कसरी चिल्ला हुन्छन् भन्ने वर्णन भने गरिएको छैन । लाखाँै वर्ष पुरानो भूभागले कसरी काल्कारिअस चट्टान निर्माण गर्छ भन्ने बारे विज्ञहरुले थप विवेचना गरिसकेका छैनन् ।
सन् २००९ मा स्थानीय पर्यटन ब्युरोका निर्देशकले चान डान या क्षेत्रमा पर्यटकलाई भ्रमण गराउन जनताहरुलाई भनेका थिए ।
मेट्रो डट सीओ डट युकेबाट अुनदित
लहान । सरकारले भारतीय बजारबाट कुखुुरा र पक्षीजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सिरहाका विभिन्न बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ । भारतमा बर्डफ्लु देखापरेपछि सरकारले भारतबाट कुखुरा र अण्डालगायत पक्षीजन्य वस्तुको आयातमा
अब अण्डाबाटै मान्छेको जन्म ! वैज्ञानिकले ल्याबमा बनाए मानवीय अण्डा !
एडिनबर्ग युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले प्रयोगशालामा मान्छेको अण्डा विकसित गरेको दाबी गरेका छन् । सामान्य शरीरसँगै जन्म लिने हरकोही स्त्रीहरुमा सामान्यतया करिब १० देखि २० लाख अविकसित अण्डाणु रहेको हुन्छ । किशोरावस्था
अण्डामा नेपाल पूर्ण आत्मनिर्भर
काठमाडौँ / सरकारी घोषणा भएको तीन वर्षपछि नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ । सरकारले पशु र पन्छीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारी
चितवन। चाडपर्वसँगै काठमाडौँबाट सर्वसाधारण बाहिरिन थालेपछि खपत घट्दा अण्डाको मूल्यमा कमी आएको छ । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले दिएको जानकारीअनुसार एक क्रेट (३० वटा) ठूलो अण्डाको फार्मबाट किसानले बिक्री गर्ने